Na-eguzogide mmanụ na enweghị ntụpọ, njikwa mmanụ dị mma, na-eguzogide mmanụ na enweghị ntụpọ, ọ bụghịkwa nke gbawara agbawa. Enwe anụ ahụ, na-agbanwe agbanwe ma dị nro nke ejiri teknụzụ polymer mee, enweghị nchekwa na enweghị isi pụrụ iche, dị nro ma dịkwa nro, na-akpasu iwe ma na-anaghị efe efe.
Emebere sponges ndị a ka ha bụrụ ngwa zuru oke maka ịgwakọta. Enwere ike iji ha ụdị ngwaahịa etemeete dị iche iche gụnyere ntọala, ude BB, ntụ ntụ, ihe mkpuchi, iche, mmiri mmiri, wdg.
Maka ntụ ntụ na mmiri mmiri
Ghichaa ngwaahịa ntụ ntụ, dị ka ntọala, ntụ ntụ rụrụ wdg, ebe nke ahụ na -ata ntụpọ ozugbo wee fesa n'ihu gị mgbe ị na -eji sponge etemeete kpọrọ nkụ. Maka itinye ngwaahịa mmiri ara ehi ma ọ bụ ude mmiri, dị ka ude BB, ude mmiri, ihe mkpuchi, nke a buru ụzọ mikpuo n'ime mmiri, ma ọ bụ ọ ga -amịpụta ọtụtụ ihe ịchọ mma, na -ebute ịla n'iyi.
Ong Spongy na Rusuable
Ogbo ndị a na -ete etemeete na -adị mma ma na -eguzogide mmiri, nke na -agaghị enwe nkwarụ mgbe ejiri ya ụbọchị. Ha dị mfe iji ma dị ọcha, na -eme ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ site na ndị na -amu amu na uru. Ọ dị mfe ịkwalite usoro ịma mma gị site na iji ogbo a na-arụ ọtụtụ ọrụ.
Dị nro n'akpụkpọ ahụ
Na-anabata ihe na-abụghị latex na ihe anaghị egbu egbu, sponge etemeete ndị a bụ Q dị nro ma dịkwa mma na nkasi obi akpụkpọ ahụ. Ha dị mma iji. Ngwa ọrụ etemeete ndị a dị nro, na-agbanwe agbanwe bụ ezigbo nhọrọ maka ịnweta ntọala na-enweghị ntụpọ nke ntọala gị niile, ihe ngosi dị elu na bronzer.
Dị Mfe Dị Ọcha:
Jiri mmiri ọkụ were sponge ahụ fesaa, tinye ntụtụ ole na ole nke nchacha dị nro, were nwayọ jiri mkpịsị aka wepụta etemeete, mmanụ na nje.
Pịa n'ihu wee jiri mmiri dị ọcha sachaa, sachaa ogbo ahụ n'okpuru mmiri na -agba agba ruo mgbe mmiri gwụchara.
Sụchaa ruo mgbe ọ nweghị ihe fọdụrụ, jiri akwa nhicha mmiri gụpụ mmiri ahụ, debe ya na ebe akọrọ na ikuku.
Nke gara aga: Ladies etemeete mmiri na akọrọ na -agbanwe etemeete ogbo akwa
Osote: Dongshen etemeete ogbo blender maka ntụ ude ma ọ bụ mmiri mmiri ngwa
etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Nịm etemeete ahịhịa, Mee Ncha, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ,